Midawga Afrika oo ka hadlay doorashada Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
Midawga Afrika oo ka hadlay doorashada Soomaaliya
Midawga Afrika ayaa ka hadlay, sida ay u arkaan, heshiiskii arrimaha doorashada, ee ay dhawaan gaareen gollaha wadatashiga qaran.
MUQDISHO, Soomaaliya- Midawga Afrika ayaa bogaadiyey, qodobbadii ka soo baxay, shirkii gollaha wadatashiga, ee lagu gorfeeyey arrimaha doorashooyinka dalka.
War qoraal ah oo uu soo saaray Moussa Faki Mahamat, oo 14- March 2017, loo doortay gudoomiyaha guddiga Midowga Afrika, ayuu dhinacyada siyaasada Soomaaliya, ku dhiira galiyey sii amba qaadida, go'aannadii ka soo baxay shirka gollaha wadatashiga.
Gudoomiyaha ayaa dhamaan saamileyda siyasadeed ee dalka ugu baaqay, in laga dhabeeyo dhaqan galinta qodobbadii lagu heshiiyey, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimada ay leedahay, in 25 febraayo ee sanadkan, lagu dhameeyo doorashada aqalka hoose ee dalka.
Midawga Afrika ayaa dalbaday, in la ilaaliyo xasiloonida yar ee ka jirta Soomaaliya, iyagoo soo jeediyey in la kordhiyo, wada hadallada dhinacyada siyaasadda ay ka yeelanayaan arrimana doorashooyinka, taas oo baajin karta gacan ka hadal.
Waxey sidoo kale tilmaameen, in laga waantoobo boobka iyo musuqa lagu eddeeynayo doorashooyinka Soomaaliya, waxaana ay ku taliyeen in doorashadu ay noqoto, mid ku dhacda hannaan daah-furan oo lagu qanci karo.
Tan iyo markii ay dib u dhacday, doorashooyinki la filayey ee dalka, waxaa kordhayey culeyska iyo caddaadiska dhinacyada siyaasadda Soomaaliya, uga imanaya Beesha Caalamka, kuwaa oo waqtigan kala guurka ah, soo saaraya qoraalo ay ku dalbanayaan, in dalka ay ka qabsoonto doorasho caddaalad ah, oo ku soo idlaata waqtigii gollaha wadatashiga ay go'aamiyeen.